2020 - Tameelay
Nan Khin May Win
[ February 21, 2021 ] လူတစ်ယောက်ကို မပြောသင့်သော စကားများ	General Knowledge
[ February 18, 2021 ] သမီးလေး ခုချိန်ကစပြီး ဒီအရာတွေကို ငြင်းလိုက်ပါ	General Knowledge
[ August 21, 2020 ] (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
[ August 13, 2020 ] (၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
[ August 12, 2020 ] ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ….	Buddha Words and Knowledge
(၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
August 21, 2020 daddy Comments Off on (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ ၁။ (၂၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၈၁၁) ခုအား ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၀) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။ ၂။ (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် […]
August 13, 2020 daddy Comments Off on (၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၂၆) ခု၊ – ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၆) ခု၊ – ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL, Mandalay) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ […]
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ….
August 12, 2020 daddy Comments Off on ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ….
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ…. မကောင်းတဲ့ကံ တွေ ပပျောက်အောင် ကံကောင်းတဲ့နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို၊ ရှိတယ်။ အကုသိုလ် အကျိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကို လူတွေက ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရား တွေက ကိုယ့်သန္တာန် ရောက်ပြီ၊ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင်… ဒါက ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်ရမယ်။ ငါတို့လုပ်နေတာ အမှားမရှိဘူး၊ အကောင်း တွေလုပ်တယ်။ သို့သော် အတိတ်တုန်းက မှားယွင်းမှုတွေကလည်း လူတွေရဲ့သန္တာန် […]
မီးသတ်ကား အတိုက်ခံရလို့ ရခဲ့တဲ့လျော်ကြေး ကို မီးသတ်ဌာန ကို ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကားပိုင်ရှင်
July 30, 2020 daddy Comments Off on မီးသတ်ကား အတိုက်ခံရလို့ ရခဲ့တဲ့လျော်ကြေး ကို မီးသတ်ဌာန ကို ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကားပိုင်ရှင်
ယခုအကြောင်းအရာသည် ရွှေပြည်သာအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တင်ထားသော Post အား ပြန်လည်မျှေ၀ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် (၂၅ . ၇ . ၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ်ဖြင့် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တဘက်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ဘက်အား လျှော်ကြေးငွေ သိန်း (၃၀) ကျပ် ပေးလျှော်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါ တစ်ဖက်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဘက်မှ လျှော်ကြေးငွေ သိန်း(၃၀)မှငွေ ကျပ် (၁၀)သိန်း အားပြန်လည် ပေးအပ် လှုဒါန်းကူညီခဲ့ပါသည်။ ယခုလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဘက်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှူ့စာနာနားလည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တင်ရှိနေသောအကြွေးလည်းအနည်းငယ်လျှော့သွားလို့လည်းဝမ်းသာမိပါသည်။ […]
July 30, 2020 daddy Comments Off on ခပ်တုံးတုံးမိန်းမလို့တော့မထင်လိုက်နဲ့
အကဲမစမ်းနဲ့ ပွဲကြမ်းသွားမယ် မိန်းမတစ်ယောက်ကခေါင်းကလေးငုံ့ပါးစပ်ကလေးစေ့ထားတိုင်း မာနနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးညံ့တဲ့ခပ်ညံ့ညံ့,ခပ်တုံးတုံးမိန်းမလို့တော့မထင်လိုက်နဲ့။ တစ်ယောက်တည်းကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်လို့ ရည်ရွယ်ရာပန်းတိုင်ကိုလျောက်လှမ်းနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို အထင်သေးစော်ကားချင်သူတွေရှိတယ်။ လှောင်ပြောင်ရူံ့ချချင်သူတွေရှိတယ်။ကဲ့ရဲ့ချိုးနှိမ်ချင်သူတွေရှိတယ်။နင်းဖိခြေမွချင်သူတွေရှိတယ်။ ဘယ်သူ့အကူအညီမှမယူ,ဘယ်သူ့အမှီအခိုမှမပါပဲ, ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုမှတော့ မာနနဲ့ထက်မြတ်မူအစွယ်တွေကသာမာန်ထက်ချွန်မြလို့ပေါ့… တစ်ခါတလေအမောက်ကလေးထောင်,အစွယ်ကလေးထုတ်ပြလိုက်မှ တစ်ပွဲတစ်လမ်းအကဲစမ်းကြည့်ချင်သူတွေရှဲသွားကြတော့တယ်။ မှတ်ထားနော်!အဲဒီမိန်းမမျိုးတွေကအစွယ်တစ်ချောင်းချိုးလို့ကတော့ နောက်ထက်အစွယ်ပွားတွေပြန်ထွက်လာတတ်တယ်။ သတိထား…. Nan Khin May Win အကဲမစမ္းနဲ႔ ပြဲၾကမ္​းသြားမယ္​ မိန္းမတစ္ေယာက္ကေခါင္းကေလးငံု႔ပါးစပ္ကေလးေစ့ထားတိုင္း မာနနဲ႔ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးညံ့တဲ့ခပ္ညံ့ညံ့,ခပ္တံုးတံုးမိန္းမလို႔ေတာ့မထင္လိုက္နဲ႔။ တစ္ေယာက္တည္းကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္လို႔ ရည္ရြယ္ရာပန္းတိုင္ကိုေလ်ာက္လွမ္းေနတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ကို အထင္ေသးေစာ္ကားခ်င္သူေတြ႐ွိတယ္။ ေလွာင္ေျပာင္ရံူ႔ခ်ခ်င္သူေတြ႐ွိတယ္။ကဲ့ရဲ႕ခ်ိဳးႏွိမ္ခ်င္​သူေတြ႐ွိတယ္။နင္းဖိေျခမြခ်င္သူေတြ႐ွိတယ္။ ဘယ္သူ႔အကူအညီမွမယူ,ဘယ္သူ႔အမွီအခိုမွမပါပဲ, ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုမွေတာ့ မာနနဲ႔ထက္ျမတ္မူအစြယ္ေတြကသာမာန္ထက္ခြၽန္ျမလို႔​ေပါ့… တစ္​ခါတ​ေလအေမာက္ကေလးေထာင္,အစြယ္ကေလးထုတ္ျပလိုက္မွ တစ္ပြဲတစ္လမ္းအကဲစမ္းၾကည့္ခ်င္သူေတြ႐ွဲသြားၾကေတာ့တယ္။ မွတ္ထားေနာ္!အဲဒီမိန္းမမ်ိဳးေတြကအစြယ္တစ္ေခ်ာင္းခ်ိဳးလို႔ကေတာ့ ေနာက္ထက္အစြယ္ပြားေတြျပန္ထြက္လာတတ္တယ္။ […]
July 27, 2020 daddy Comments Off on ကျွန်မကြိုးစားရဦးမယ်လေ
ကျမက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး …ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေတယ်လေ။အမြင်ကြည်တာမကြည်တာ သူတို့အပိုင်း ..ကျမကမှန်တယ် ထင်ရင်ဘယ်သူတားတားလုပ်တတ်တယ်။ဖေဖေ ကတော့ အဲ့ဒါ တဇွတ်ထိုးဆန်တာတဲ့ ။ ကျမပြုံးနေလိုက်တယ်။ကိုယ့်ခံယူချက်ပဲလေ။ကိုယ်ကအမှားကင်းသူမဖြစ်နိုင်တော့အမှားနည်းအောင်ဆင်ခြင်တယ်။ တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လေ .. ပတ်ဝန်းကိုဂရုမစိုက်နိုင်အားလေပဲ။“ချီးမွမ်း (၇)ရက် ၊ကဲ့ရဲ့(၇)ရက်´´ဆိုတာမှားတယ်။ချီးမွမ်းတာ(၇)ပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်။ကဲ့ရဲ့စကားကတော့ ကြုံရင်ကြုံသလိုပြောနေကြမှာပဲ။ ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတော်တော်ရှားပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများကကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုတတ်တဲ့အကျင့်ကရှိနေတော့ ဂုဏ်ပြိုင်တယ်၊ ပိုက်ဆံပြိုင်တယ်၊ စီးပွားရေးပြိုင်မယ်၊ အဝတ်အစားကအစ သားသမီးကိစ္စအဆုံး .. ကိုယ်ကသာ ..သာချင်ကြတာလေ။ကျမ လက်စွဲထားတဲ့စာသားလေးက`ပတ်ဝန်းကျင်စကားအလေးထားကသွားမယ့်အရေးတစ်လှမ်းနှေး၏´တဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်သံတွေက ကျမခြေလှမ်းတွေကို တုံ့နှေးစေခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တော့မှ ..သူတို့ပေးတဲ့ […]
July 27, 2020 daddy Comments Off on သင်ဟာ အချစ်ကံခေလွန်းသည့်မိန်းကလေးဆိုရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ပါ
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အချစ်ကံခေကြတာ များပါတယ်။သင်က စိတ်ထားကောင်းတော့ သင်ချစ်ခဲ့သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကကျတော့ သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရတာလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆိုးတဲ့ယောက်ျားတွေချည်းပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဝေဒနာတွေ လျော့ပါးသက်သာစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်မှာ ပြဿဿနာရှိနေတာ မဟုတ်ဘူး အချစ်ကံခေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု မပျောက်ပါနဲ့။ ရွေးချယ်မှု မှားခဲ့တာကလွဲလို့ သင်ဘာအများမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ သင့်ကို […]
July 27, 2020 daddy Comments Off on ဘဝမှာ လုံးဝမပေါင်းအပ်သောလူ(၃)မျိုး
မိမိနေထိုင်ရာ လောကကြီးတွင် သူငယ်ချင်းအဖြစ် မပေါင်းသင်း မပေါင်းအပ်သော လူများ၏ အကြောင်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အလိုက်သင့်ပေါင်းပြီး အတွင်းကြိတ်မကောင်းကြံသောသူမိမိအားအလိုက်သင့် ရေလိုက်ငါးလိုက်ပေါင်းသင်းကာ မိမိအားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တိုက်ခိုက်တတ်သော သူမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကို လမ်းခင်းကာ နင်းချပစ်လေ့ရှိသော သူများပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူများကို စွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။ ၂။ လိုရင်တစ်မျိုး၊ မလိုရင်တစ်မျိုး ဆက်ဆံတတ်သူမိမိထံမှ အခွင့်အရေးလိုချင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခွင့်အရေးမရနိုင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ဆက်ဆံတတ်သော သူများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ […]
ကိုယ်က အကောင်းဆုံး ချစ်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခန်းရပ်သွားပြီလား ?
July 27, 2020 daddy Comments Off on ကိုယ်က အကောင်းဆုံး ချစ်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခန်းရပ်သွားပြီလား ?
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုယ်က အစွမ်းကုန်ချစ်ခဲ့ပေမယ့် အဆုံးသတ်မလှတဲ့အခါ ပုံမှန်ထက် အရမ်းခံစားရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဘယ်သူက အသည်းမကွဲဘဲနေမလဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမဆို ဒဏ်ရာဘယ်လောက်နက်နက် တနေ့နေ့မှာတော့ ဒီနာကျင်စရာတွေကြားက ရုန်းထွက်သွားနိုင်ကြတာပါဘဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျမသွားအောင် အားပေးဖော်လိုပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကတော့ သင့်ကို စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်တစ်ခုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင် လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က သူပျော်အောင် အမြဲလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံထားပါ။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်လိုပါဘဲ ကိုယ်က သူ့ကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးပေမယ့် […]
July 27, 2020 daddy Comments Off on ၇ ရက် သားသမီးများ အတွက် အချစ် ဗေဒင်…!
တနင်္ဂနွေ သားသမီး … အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့အတွေးကတော့အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ်ဆိုတာ ပေးလို့ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ….လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။အခြေအနေပေးရင်တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ်ယူတတ်ပါတယ်။သူများအထင်ကြီးလေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်။အမျိုးသမီးများကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ချစ်သူအတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ ။တနင်္ဂနွေ သမီးများကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး […]
February 21, 2021 Comments Off on လူတစ်ယောက်ကို မပြောသင့်သော စကားများ
သမီးလေး ခုချိန်ကစပြီး ဒီအရာတွေကို ငြင်းလိုက်ပါ
February 18, 2021 Comments Off on သမီးလေး ခုချိန်ကစပြီး ဒီအရာတွေကို ငြင်းလိုက်ပါ
August 21, 2020 Comments Off on (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
August 13, 2020 Comments Off on (၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
August 12, 2020 Comments Off on ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ….